dingana fanamafisana induction - mpanamboatra milina fanamafisam-peo | vahaolana fanafanana fampidirana
induction preheating process
Induction ny fantson-koditra vita amin'ny varahina ho an'ny mofomamy mafana
Famerenana ny fantson-koditra vita amin'ny varahina ho an'ny fiorana mafana
Mba hisian'ny fanatsarana ny fiarovana sy ny vokatra, ary hampihenana ny vidin'ny angovo, amin'ny alalan'ny fampiasana ny induction fa tsy ny fanamafisana ny fanoherana. Mba hampitomboana ny vokatra, te-hahay ny hafanana 3 ny raozy amin'ny tanany amin'ny 780 ° C ao anatin'ny 25 segondra. Ho an'ity fampiharana ity dia manasatra ny tehina iray izahay, ka ny tanjonay dia ny manasitrana ny tsorakazo tokana mankany 780 ° C ao anatin'ny 25 segondra raha kely ny 45 kW ny fahefana. Izany dia ahazoana antoka fa rehefa maneno ny rodan'ny 3, ny rafitra 110 kW dia hihaona amin'ny fepetra famokarana.
DW-HF-70kW Induction Heating Power Supply, miasa eo anelanelan'ny 10-50 kHz
• Tehamaina varahina
• Ny kodiarana mahazatra, 10 mitodika, D = 50mm, novolavolaina sy novokarin'ny DaWei Induction Power Technologies ho an'ity fampiharana manokana ity - mahavita ny fefy 3 amin'ny rantsana hafanana.
Temperature: 780 ° C
Hery: 70 kW
Fotoana: 24 sec
Nifandray tamin'ny DW-HF-70kw Heat Station ny seranana Power DW-HF.
Ny Coil nentim-paharazana dia napetraka tamin'ny Station Heat.
Ny tapa-kazo varahina dia napetraka tao amin'ny Coil.
Nivadika ny famenom-pahefana.
Ny seranana DW-HF miasa ao amin'ny 20 kW dia nahavita nanasitrana tsara ny tsorakazo varahina tokana tao anatin'ny 24 segondra, izay latsaky ny fe-potoam-piofanana 25 faharoa natao ho an'ny fanandramana. Tapa-koditra telo no andrasana amin'ny hafanana ao anatin'ny 25 segondra ary manodidina ny 60 kW ny hery (3 ny rod dia 3x ny entana ary 3x ny hery). Ny rafitra Induction 90 kW dia mifanaraka amin'izay takian'ny mpanjifa.
Ny famokarana induction dia manome:
Fikirizana haingana kokoa
Ny dingana toy izany dia azo antoka kokoa noho ny fanamafisana ny lelafo
Teknika tsy misy loto, madio ary azo antoka
Sokajy Technologies Tags fanodinana kofehy varahina, induction hot etsy, induction preheating copper, induction preheating process, induction preheating rod